Nyocha nke BSF Maggot Cultivation - obere na nnukwu n'ọtụtụ
Nyocha banyere azụmahịa nke ịzụlite ikpuru odorless
Nyocha nke Odighi Akwukwo Maggot Cultivation - Na nyocha nke ahihia nke akwukwo nri, ihe mbu di mkpa iji chebara echiche bu ihe ndi ozo eji. Na nyocha nke BSF nhazi ma ọ bụ nyocha nke ehi, nke a bụ ihe eji eme ihe eji eme ihe, ihe mkpofu ụlọ na nri. Ihe ụfọdụ dị mkpa bụ nyochapụta nsị nke BSF, ya bụ
1. Ihe ngwa ngwa
Ihe mbụ na-enyocha BSF ịzụlite bụ ịhọrọ ngwaọrụ. na ihe anyị na-ahọrọ bụ ihe mkpofu ahịhịa, ọtụtụ ihe mkpofu anụ ọhịa enweghị uru akụ na ụba dị mkpa, a na-atụpụkarị ya. Tụkwasị na nke ahụ, ugbu a, ịdị adị ya na-ejikọta ihe mkpofu na-abaghị uru.
Ya mere, iji nweta ngwaọrụ maka mmepụta nke ngwaọrụ, ọ dị mkpa ịnwa ịhazi nsị anụ. Ajụjụ bụ, ndi oru ugbo nwere ike ime ya n'onwe ha?
A ghaghị imepụta ihe ndị na-emepụta ihe dị iche iche, ma ndị òtù obodo na ndị ọchịchị mpaghara. Ọ bụrụ na nke a siri ike inweta, ndị ọrụ ugbo nwere ike ịrụkọ ọrụ na ụlọ ọrụ nri na-enwe oke ihe oriri.
N'ozuzu, ọnụnọ nke ala ha na-adị iche. Ndị na-eme ihe ubi kwesịrị ịkọpụta ihe nwere ike ịme ihe ndị nwere ike ịme ka ha wee nwee ike ịga nke ọma.
2. Onu ahia ndi mmadu
Ihe nke abuo n'inyocha n 'ubi nke BSF bu nhazi nke ndi n'ji. Ụlọ ọrụ a na-emepụta ihe na-emepụta ọgwụ na-arụ ọrụ iji nweta protein ndị ọzọ na-enye azụ na azụ anụ ụlọ na ọnụ ala dị ntakịrị n'ihi nkwụsị nke nsị anụ.
Ọ bụrụ na a na-eme mgbalị mmepụta iji dochie ntakịrị nri azụ na azụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ anụ ụlọ, ọ ga-enwe mmetụta dị ukwuu na ụlọ ọrụ a.
Maka ọnụahịa nke nri azụ site n'afọ ruo n'afọ abawanyela. E wezụga nke ahụ, ịdị adị nke magot nwekwara mmetụta dị kpọmkwem n'ahụ ndị ọrụ ugbo na ndị ọrụ ugbo. Ha na - enwe ike ịmepụta protein ndị ọzọ na - enweghị onwe ha ka ha wee belata mmefu mmepụta.
Ndị ọzọ ndị ga - enwekwa mmasị na ngwaahịa ahụ site na usoro ihe nchịkwa a bụ ihe oriri na ndị ọrụ ugbo mkpụrụ osisi, n'ihi na ha na - enye nri ọka.
3. Ụdị ahịa
Ihe nyocha nke atọ nke ịzụlite BSF bụ ụdị azụmahịa nke a ga-arụ. E nwere ụdị ọrụ abụọ nke magot nke na-emepe emepe.
Ụdị nke mbụ bụ ụlọ ọrụ aka ha, nke bụ ndị ọrụ ugbo ma ọ bụ ndị ọrụ ugbo na-emepụta magot iji gboo mkpa ha
Ụdị nke abụọ bụ ụdị azụmahịa na usoro nkwekọrịta nke plasma. Plasma nucleus partnership partnership bụ ụdị mmepụta nke dị mma maka mmepụta nke ihe na-emepụta ebe ndị isi (isi) ga-arụ ọrụ dị ka onye na-emepụta ihe na BSF.
Ọnọdụ plasma nwere ọrụ na magot ịgbatị (ntụgharị nke nsị organic) nke a pụrụ ime na nhazi usoro ọgwụgwọ, ụlọ, na ihe ndị ọzọ.
A na - agbapụta magot ahụ na - emegharị ya ka ọ bụrụ na a ga - edozi ya n'ime ntụ ọka ma ọ bụ ụlọ ahịa.
4. Ahịa ahia
A na-eme ka ihe ndị dị na Maggot dị iche iche na azụmaahịa azụmahịa atọ, ya bụ
Akuku Oge Maggot Cultivation
Obere Akwa Maggot Cultivation
Ọdịdị nke Ọkwa Maggot Cultivation
Nyochaa ihe nyocha anụ dị iche iche dị ka azụ na anụ ọkụkọ. Nchịkọta anụ ụlọ a bụ iji nyochaa uru ndị a na-enweta na ihe ndị na-emepụta ihe. Nsonaazụ nke nyocha a bụ ihe ndabere maka ịtụle echiche tupu ịmalite azụmahịa
Ụdị Production Business
A na-erezi ụdị egg na magot mmepụta dị ka azụ na azụ anụ ụlọ, na-enweghị mgbalị nke ịmepụta pellets ma ọ bụ nkịta shading. A na-ekwu na nkà na ụzụ ga-eme nke ọma site na obodo ma ọ bụrụ na ọ na-emezu ihe atọ ndị a
Akuku nke ndu na ihe ndi ozo nke umu anumanu emeela nke oma
N'uzu, a pụrụ iji nkà na ụzụ mee ihe
N'elu ego, o nwere ike inye uru
Nchịkọta azụmahịa bụ ụdị ego iji chọpụta uru nke isi obodo ma ọ bụ ego ọ dị mkpa iji rụọ ọrụ, na iji chọpụta ókè ahịa dị. Ụfọdụ n'ime atụmatụ ndị dị mkpa iji nyochaa azụmahịa
Nkwekọrịta na nha
Ọnụahịa (r / c ruru)
Utu na-eme ka ọ bụrụ ebe a na-akpọ / bep) na
Ọ bụrụ na ogo R / C karịrị 1, azụmahịa ahụ nwere ike ịme ọsọ, na ntụgharị ihu.
Enwere ike ịchọta ụdị ọrụ a site na nchịkọta ego ise ahụ dị ka ndị a.
Onodu ubochi di ugbu a (NPV)
Net uru efu ruru (Net B / C)
Ọnụ ego nke nlọghachi (IRR)
Oge ịkwụ ụgwọ (PBP)
Ghapu ọbụna isi (BEP)
Ulo oru a choro n'ime mmeputa nke magot gụnyere ulo maka insectarium, larvarium, igwe onu ogugu ahihia, igwe akuko, na ugbo. Ihe na-agbanwe na akwụ ụgwọ ndị a na-akwụghị
Ụgbọ njem na-akwụ ụgwọ maka mbupu ihe mkpofu,
Ahịa nke achicha mmanụ, na
Ọrụ akwụ ụgwọ ọrụ.
A. Achọpụta nke nyocha nke azụmahịa mbụ
Na nyochaa azu anụ a, a na-eche na e wuru insectarium na ebe 2 m2 na larvarium na-ekpuchi ebe nke 3 m2
Otutu ihe eji eme ihe n 'ulo bu 200kg / day
Magot mere site na 10% nke akụrụngwa. Nke ahụ bụ, mmepụta nke magot bụ 20 kg / ụbọchị
A na-eji magot nwetara maka mmepụta nke red ma ọ bụ ụmụ ahụhụ dịka 15%, ebe 85% na-ere ya na ụlọ ọrụ aquaculture
Ahịa ere ahịa nke magot bụ Rp7.000 / kg
Ngwuru ahia nke organic fatịlaịza site na usoro ihe ngbaghari ndu bu Rp1.000 / kg.
Maggot Akwukwo Nyocha Anumanu - Nkọwa nke ugwo ulo oru ugbo na akuko ndi oru na Magot
Ọnụ ọgụgụ nke mmepụta ego zuru oke na mmepụta nke magot mmepụta n'ime otu afọ
Ọnụ ego zuru ezu = Ụgwọ kwụrụ ụgwọ + Ụgwọ ndị a na-akwụghị ụgwọ
Onu ogugu onu kwa ubochi
Onu ogugu ugwo kwa afo = Nchikota onu ahia nke magot (kg) X ire ahia nke magot (Rp)
= (20kg / ụbọchị X Rp7.000) X 85% X (365 ụbọchị - izu 52) = Rp43.435.000
Uru nke uru ndị a nwetara na azụmahịa mmepụta nwere ike ịgbakọ site na iji usoro a.
Erite (Rp) = Ego niile (Rp) - Total Production Cost (Rp)
Enweghi ike inweta ndi oru uzo di iche iche
Dabere na nchọpụta azụmahịa nke data n'elu, enwere ike kpebisie ike ịmepụta azụmahịa nke magot dị ka ndị a:
1. BEP (Kwụsị Ọbụna Ihe)
Ntucha ọbụna Point (BEP) na Units
BỤRỤ: Kwụsị Ọbụna Ihe
FC: Kwụrụ ụgwọ
VC: Agbanwe ọnụ
P: Ahịa kwa otu
S: Ahịa Mpịakọta
Ogbusi nke Ozo (BEP) na Rupiah
Ọnụ ego kwụ ọtọ na ego ndị na-anaghị adịgide adịgide kwa ọnwa
Ebu Ọnụ = Ụkwụ na-efu ma ọ bụ Production / 120.000 / 6.205 = 19 Kg
Ụgwọ ndị a na-akwụghị ụgwọ = Ugwo ndị a na-akwụghị ụgwọ / Production / 1.850.000 / 6.205 = 298 Kg
BỤ na Kg
Ọnụ ego a na-akwụ / (Ahịa Ahịa Kwa - Kwụsị Efu Site Kg) = 120.000 / (Rp7.000 - 298Kg) = 18 Kg
BỤ na Rupiah
Ọnụ na-akwụ ụgwọ / 1- (Ọnụ efu / ahịa) = 120.000 / 1- (1.850.000 / 43.435.000) = Rp125.338
Nkwụsịtụ-ọbụna isi na kilo bụ 18kg. Nke a pụtara na na ọnụọgụgụ / nọmba ndị a abụghị uru ma ghara ida.
Nkwụsịtụ-ọbụna isi na rupiah bụ Rp125.338
2. Nlaghachi nke ulo oru ugbo (ROI)
ROI = (Uru / Ọnụ Ntuzi Na-efu) x100% = Rp43.435.000 / 1.920.000 = 2.262,24%.
3. Ụgwọ Ezuru Ego (R / C)
Enwere ike ichoputa ihe omuma ahia nke ndi na-acho uzo di iche iche site na usoro ndi ozo,
R / C = Ego (Rp) / Total Production Cost (Rp) = Rp43.435.000 / Rp1.920.000 = 22,62
Ihe R / C e nwetara bụ 22,62 ma ọ bụ karịa 1. Ọnụ ọgụgụ a na-egosi na ọkara dị ukwuu na-arụ ọrụ ahịa magot emeputa dị mfe.
4. Oge nkwụ ụgwọ (PBP)
A na-atụ anya na nghazi oge ịkwụ ụgwọ ga-enwe ike nyochaa oge mweghachi azụmaahịa nke azụmahịa na-azụ ahịa ahịa na-emepụta ihe na-esonụ:
PBP (ọnwa) = Ego dum (Rp) / Ụgwọ Ọrụ (Rp) x 1 afọ = (1.100.000 / 41.515.000) x 12 ọnwa = 0,3 ọnwa.
Nsonaazụ nke nyocha a na-egosi na isi ụlọ ọrụ ego niile nke ụlọ ahịa ndị na-ere ọgwụ na-abaghị uru ga-alaghachi na ọnwa 0,3.
B. Nzube nke nyocha nke azụmahịa obere
Na nyochaa azu anụ a, a na-eche na e wuru insectarium na ebe 100 m2 na larvarium na-ekpuchi ebe nke 100 m2
Otutu ihe eji eme ihe n 'ulo bu 500kg / day
Magot mere site na 10% nke akụrụngwa. Nke ahụ bụ, mmepụta nke magot bụ 50 kg / ụbọchị
= (50kg / ụbọchị X Rp7.000) X 85% X (365 ụbọchị - izu 52) = Rp108.587.500
Ebu Ọnụ = Ụkwụ na-efu ma ọ bụ Production / 32.050.000 / 15.513 = 2.066 Kg
Ụgwọ ndị a na-akwụghị ụgwọ = Ugwo ndị a na-akwụghị ụgwọ / Production / 9.900.000 / 15.513 = 638 Kg
Ọnụ ego a na-akwụ / (Ahịa Ahịa Kwa - Kwụsị Efu Site Kg) = 32.050.000 / (Rp7.000 - 638 Kg) = 5.038 Kg
Ọnụ na-akwụ ụgwọ / 1- (Ọnụ efu / ahịa) = 32.050.000 / 1- (9.900.000 / 108.587.500) = Rp35.265.149
Ọbụna nkwụsịtụ n'arọ bụ 5.038 n'arọ. Nke a pụtara na na ọnụọgụgụ / nọmba ndị a abụghị uru ma ghara ida.
Nkwụsịtụ-ọbụna isi na rupiah bụ Rp35.265.149
ROI = (Uru / Ọnụ Ntuzi Na-efu) x100% = Rp108.587.500 / 40.450.000 = 268,45%.
R / C = Ego (Rp) / Total Production Cost (Rp) = Rp108.587.500 / Rp40.450.000 = 2,68
Ihe R / C e nwetara bụ 2,68 ma ọ bụ karịa 1. Ọnụ ọgụgụ a na-egosi na ọkara dị ukwuu na-arụ ọrụ ahịa magot emeputa dị mfe.
PBP (ọnwa) = Ego dum (Rp) / Ụgwọ Ọrụ (Rp) x 1 afọ = (17.750.000 / 68.137.500) x 12 ọnwa = 3.1 ọnwa.
Nsonaazụ nke nyocha a na-egosi na isi ụlọ ọrụ ego niile nke ụlọ ahịa ndị na-ere ọgwụ na-abaghị uru ga-alaghachi na ọnwa 3.1.
B. Nzube nke nyocha nke azụmahịa n'ọtụtụ
Na nyocha nke azu anụ, a na-eche na e wuru insectarium na mpaghara nke 400 m2 na larvarium na-ekpuchi ebe nke 400 M2
Otutu ihe eji ere ahihia bu 3 tons / day
Magot mere site na 10% nke akụrụngwa. Nke ahụ bụ, mmepụta nke magot bụ 300 kg / ụbọchị
= (300kg / ụbọchị X Rp7.000) X 85% X (365 ụbọchị - izu 52) = Rp651.525.000
Ọnụ ndị a kapịrị ọnụ = Ụgwọ kwụ ụgwọ / Production ọrụ = 120.300.000 / 93.075 = 1.293Kg
Ụgwọ ndị a na-akwụghị ụgwọ = Ugwo ndị a na-akwụghị ụgwọ / Production / 26.700.000 / 93.075 = 287 Kg
Ọnụ ego a na-akwụ / (Ahịa Ahịa Kwa - Kwụsị Efu Site Kg) = 120.300.000 / (Rp7.000 - 287Kg) = 17.920 Kg
Ọnụ na-akwụ ụgwọ / 1- (Ọnụ efu / ahịa) = 120.300.000 / 1- (26.700.000 / 651.525.000) = Rp125.440.655
Nkwụsịtụ-ọbụna isi na kilo bụ 17.290kg. Nke a pụtara na na ọnụọgụgụ / nọmba ndị a abụghị uru ma ghara ida.
Nkwụsịtụ-ọbụna isi na rupiah bụ Rp125.440.655
ROI = (Uru / Ọnụ Ntuzi Na-efu) x100% = Rp651.525.000.000 / Rp139.500.000 = 467,04%
R / C = Ego (Rp) / Total Production Cost (Rp) = Rp651.525.000 / Rp139.500.000 = 4,67
Ihe R / C e nwetara bụ 4,67 ma ọ bụ karịa 1. Ọnụ ọgụgụ a na-egosi na ọkara dị ukwuu na-arụ ọrụ ahịa magot emeputa dị mfe.
PBP (ọnwa) = Ego dum (Rp) / Ụgwọ Ọrụ (Rp) x 1 afọ = (246.500.000 / 512.025.000) x 12 ọnwa = 5,8 ọnwa.
Nsonaazụ nke nyocha a na-egosi na isi ụlọ ọrụ ego niile nke ụlọ ahịa ndị na-ere ọgwụ na-abaghị uru ga-alaghachi na ọnwa 5,8.